နိုင်ငံခြားသားလက်မှတ်ကို အရင်စွန့်လွှတ်စရာမလိုပဲ နိုင်ငံသား လျှောက်ထားနိုင် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း နိုင်ငံခြားသားလက်မှတ်ကို အရင်စွန့်လွှတ်စရာမလိုပဲ နိုင်ငံသား လျှောက်ထားနိုင်
epa04980617 Myanmar national, who gave his name only as Frankie (R), and fellow Burmese San Mint (2-R) show their passport and ID card as they queue outside the Myanmar Embassy waiting for their turn to vote early in Bangkok, Thailand, 17 October 2015. Nationals from Myanmar living in Thailand made their way to their country's embassy in Bangkok to cast their vote ahead of the country's general elections, which have been announced to take place on 08 November 2015. EPA/DIEGO AZUBEL
နိုင်ငံခြားသားလက်မှတ်ကို အရင်စွန့်လွှတ်စရာမလိုပဲ နိုင်ငံသား လျှောက်ထားနိုင်
နိုင်ငံခြားသားလက်မှတ်ကို အရင် စွန့်လွှတ်စရာမလိုပဲ နိုင်ငံသားအဖြစ် ဥပဒေနဲ့အညီ လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
သတင်းဓာတ်ပုံ – DIEGO AZUBEL (EPA)
မေလ ၂၉ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ် (၁၂) က ကိုယ်စားလှယ် တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်သိန်းရဲ့ နိုင်ငံခြားသားလက်မှတ် ကိုင်ဆောင် ထားသူတွေ နိုင်ငံသားပြုခွင့် ပြန်လည်လျှောက်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေကြားစဉ် ပြောကြားလိုက်တာပါ။
ဒီလိုပြောကြားရာမှာတော့ နိုင်ငံသားအဖြစ် ဥပဒေနဲ့အညီ လျှောက်ထားမှုကို ဗဟိုအဖွဲ့က သတ်မှတ်ပြီးချိန်မှသာ နိုင်ငံခြားသားအဖြစ် စွန်လွတ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံတော်သစ္စာကို ခံယူကြောင်း နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့အညီ ကတိသစ္စာပြုပြီးမှသာ နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ဖျက်သိမ်းရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “မိုရာ” အန္တရာယ်ကြောင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း သင်္ဘောခရီးစဉ်တွေရပ်နား
Next articleNLD အစိုးရ ကလေးအလုပ်သမားတွေ ပပျောက်ဖို့ ကာလရှည် ၁၅ စီမံကိန်း ချမှတ် ဆောင်ရွက်မယ်